Beijing inorambidza ndege dzese diki kubhururuka pamusoro peNguva yeOlympics
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Beijing inorambidza ndege dzese diki kubhururuka pamusoro peNguva yeOlympics
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Sports • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kurambidzwa uku kunorambidza kushanda kwese diki diki ngarava inofamba nekumhanya kwakaderera uye kushandiswa kumitambo, kushambadzira, varaidzo, nezvimwe.
Vakuru veguta reBeijing vakazivisa kurambidzwa kwenguva pfupi kwese ndege diki mundege yeChina.
Kurambidzwa kwakakwana kwekushanda kwese zvikepe zvidiki zvinobhururuka mumhepo ye Beijing uye nharaunda yekanzuru yepedyo yakamiswa pamberi pe 2022 Nguva yechando Mitambo yeOlimpiki muChina uye ichashanda pakati paNdira 28 naKurume 13.
Tichifunga nezvechiyero chakaziviswa, BeijingVagari nevaenzi vacharambidzwa kushandisa drones, kuburitsa mabharumu, kubhururuka ma-hang-glider, nezvimwe zvakadaro. Kana kurambidzwa uku kukatyorwa, manejimendi nezvimwe zvirango zvinotevedzwa.
The 2022 Nguva yechando Mitambo yeOlimpiki muguta guru reChina re Beijing akarongwa kuti aitwe kubva Kukadzi 4-20, nepo Paralympic Chando Mitambo ichaitwa munaKurume 4-13.
Munguva ye128th IOC musangano muKuala Lumpur musi waChikunguru 31, 2015, Beijing akasarudzwa kutambira 2022 Chando yeOlympic uye Paralympic Mitambo zvichiita kuti guta guru reChinese rive guta rekutanga kuita mitambo yeZhizha yeOlympic neParalympic (muna 2008) pamwe neMitambo yeChando yeOlympic neParalympic (muna 2022).
Beijing yakahwina kodzero yekutambira 2022 Olympics uye Paralympics munhangemutange yakasimba, vachikunda Kazakhstan's Almaty muna 2015, nekuita mavhoti makumi mana nemana vachipokana neaikwikwidza makumi mana.